24 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 Dimitri 476 Views စာ0မှတ်ချက် ၂၁၃၂၈ Seinfeld, Cosmo Kramer, သင့်ရဲ့ Enthusiasm နဲ့တားဆီးရန်, Elaine စေလွှတ်, George Costanza, Ideas, ဂျယ်ရီ Seinfeld, လာရီဒါဝိဒ်သည်, Lego, Lego Ideas, လူသစ်, Seinfeld
Lego Ideas ၂၁၃၂၈ Seinfeld AP ကနေကိုး - ရာသီပြေးပွဲတစ်ခုလုံးကိုညွန်ပြတဲ့ရည်ညွှန်းချက်တွေနဲ့ထုပ်ပိုးထားတယ်artဆယ်စုနှစ်များစွာသောစကားလုံးများဖြင့်စကားလုံးများပေါ်ပေါက်စေသောအရသာရှိသောရေခဲမုန့်သို့ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
၂၁၃၂၈ Seinfeld အလွန်အမင်း - လူကြိုက်များခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက် - အောင်မြင်ခြင်း '' 90 sitcom မှချစ်ခြင်းမေတ္တာစာတစ်စောင်ဖြစ်ပြီး, ရလဒ်အဖြစ်အများဆုံးဝေဖန် - ကောင်းချီးဖြစ်ရပ်များအချို့ကိုကိုးကား 30 ကျော်အပြည့်အဝပြည့်နေပါတယ်။ ပြပွဲအတွက်ညိတ်နေရာတိုင်းတွေ့နိုင်ပါသည်: ဆက်စပ်ပစ္စည်းအတွက် minifigures တင်ဆောင်လာသော; အမျိုးမျိုးသောပရိဘောဂနှင့် paraphernalia အဆိုပါ ap န်းကျင် dottedartment; နှင့်ထူးကဲ - ဒီဇိုင်းစတစ်ကာများအတွက်။
အဆင့်တိုင်း၌အီစတာကြက်ဥအသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ အကယ်၍ သင်ကစီးရီးကိုအလွန်နှစ်သက်သည်ဆိုပါက၎င်းတို့အားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်သင်မနိုင်လျှင်စိတ်မပူပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးရည်ညွှန်းချက် ၁၀ ခုကိုစာရင်းထဲတွင်ထည့်ပြီးပါပြီ ၂၁၃၂၈ Seinfeld.
10 - မင်္ဂလာပါ!
Kramer ၏ကျော်ကြားသော 'Giddy Up!' Seinfeld ၏မီးတောက်လောင်သောအိမ်နီးချင်းကရာသီ ၂ ၏ The Baby Shower တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြောခဲ့သည်။ 'အားလုံးကောင်းတယ်' သို့မဟုတ် 'သွားကြစို့' ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောလူကြိုက်များသောသော့ချက်စကားလုံးကို GIFs၊ တီရှပ်များ၊ ခွက်များနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအခြား Seinfeld အမှတ်တရများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Kramer သယ်ဆောင်လာသောစာအုပ်၏အတွင်းပိုင်းရှိပုံသဏ္inာန်ကိုထင်ရှားစေသည်။
9 - ကော်ဖီစားပွဲစာအုပ်
Kramer ရဲ့စာအုပ်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ရာသီအလိုက်5'Opposite' ကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပြီး Kramer ကကော်ဖီစားပွဲများအကြောင်းကော်ဖီစားပွဲစာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်သူသည်စာအုပ်၏အပြည့်အ ၀ စွမ်းရည်ကိုပြသသည့်ဟောပြောပွဲတစ်ခုသို့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ကော်ဖီစားပွဲများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကော်ဖီစားပွဲစာအုပ်တစ်ခုသာမက၎င်းသည်လိုအပ်ချက်ပေါ်ပေါက်လာပါကတစ်လုံးသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာ၊ Lego ဗားရှင်းအတော်လေးတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။
8 - Fusilli Jerry
ရာသီ ၆ တွင် Kramer ၏သူစိမ်းဆန်သောဝါသနာတစ်ခုဖြစ်သောသူ၏ရုပ်ထုငယ်များကိုဖန်တီးသည် friends လုံးဝခေါက်ဆွဲထဲကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဂျော့ခ်ျကော့စ်တန်ဇန် (ravolioli) ၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်များကိုငါတို့သာကြားသိရသော်လည်းကရာမာ၏ခေါက်ဆွဲများသည် Seinfeld အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်ကံကောင်းသည်။ fusilli ခေါက်ဆွဲများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဂျယ်ရီသည်မိုက်မဲသောကြောင့်ခေါက်ဆွဲငယ်လေးသည်ဂျော့ခ်ျ၏ဖခင်မတော်တဆဖျက်ဆီးခြင်းမပြုမီ Jerry ၏စင်ပေါ်တွင်ဂုဏ်ယူစွာထိုင်နေသည်။
1 ×2tile တွင်ကပ်ထားသောကပ်ခွာကို အသုံးပြု၍ ဤတွင်ကိုယ်စားပြုသည်ကအဝါရောင် nanofig နှင့် ပို၍ သင့်တော်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကစိတ်ကူးယဉ်ရယ်စရာဇာတ်လမ်းတွဲမှအံ့သြဖွယ်ခေါင်းညိတ်။
7 - 'ဒါက' ဓာတ်ပုံ
Kramer ဟာသူကိုယ်တိုင် zany မတော်တဆမှုအမျိုးမျိုးကို ၀ င်ရောက်နိုင်သူမဟုတ်ပါ။ ဂျော့ခ်ျ၏အကျော်ကြားဆုံးအမှားအယွင်းများသည်ရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်အချိန်တွင်သူသည်ဓာတ်ပုံများကိုစတိုးဆိုင်စာရေးသို့ပို့သောအခါတရားမ ၀ င်၊ တရားမ ၀ င်စာတိုက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်စွဲချက်တင်ခံရခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယခု - အထင်ကရရုပ်ပုံမှာဂျော့ခ်ျသည်သူ၏ဘောင်းဘီများ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှမဝတ်ထားသည့်အိပ်ရာပေါ်သို့ပြန့်ကျဲနေသည်ကိုပြသည်။
အဆိုပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူပုံရိပ်ဖြစ်ခဲ့သည် Legoအတွက်စတစ်ကာများအတွက် -ised ၂၁၃၂၈ Seinfeld - ပုံ၏ 18+ တံဆိပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တွယ်ကပ်နေစဉ်ယူဆရသည် - မီးဖိုချောင်နံရံတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်ရုပ်ပုံတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်။
Season3၏“ Alternative Side” တွင် Kramer သည် Woody Allen ရုပ်ရှင်၌“ ဤမုန့်ဇွန်းများသည်ကျွန်ုပ်ကိုရေငတ်နေသည်” ဟုဖော်ပြကာနောက်ဆုံးပေါ်ဖျော်ဖြေခွင့်ရရှိသည်။ သူကဂိုဏ်းတစ်ခုလုံးရပြီးပြသမှု၏အမှတ်ရစရာကိုးကားချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Jerry Seinfeld သည်ထိုစကားစုကိုပြပွဲ၏ပထမ ဦး စားပေးဖော်ပြချက်များထဲမှပထမဆုံးဖြစ်သည်။ သူ၏တစ်နှစ်တည်းခရီးစဉ်၌ပရိသတ်အားလုံးသည်ဖျော်ဖြေမှုတိုင်းတွင်ရွတ်ဆိုကြလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်စရာတစ်ခုပြီးသားရှိပါတယ် Lego pretzel ဒြပ်စင်, ထိုသို့ပစ္စုပ္ပန်နှင့်မှန်ကန်သောပါပဲ ၂၁၃၂၈ Seinfeld.
Seinfeld ၏ ၆၇ ကြိမ်မြောက် The Glasses အမည်ရှိ Kryer သည် Jerry ၏လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသောချောင်ကိုခေါက်လိုက်သောအခါခွေးတစ်ကောင်သည်မတော်တဆသေဆုံးသည်။ ၎င်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ် (လေအေးပေးစက်၊ ခွေးမဟုတ်) အနေနှင့် Kramer သည်ထွက်သွားပြီးဂျယ်ရီအား AC ယူနစ်အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်သည်။
Commando 8 လေအေးပေးစက်သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့် '12,000, XNUMX BTUs ကုန်ကြမ်းအအေးဓာတ်အား 'ရှိသည် - သို့သော်ကံမကောင်းစွာ Jerry's ap အတွက်ကြီးမားသည်artဒါကြောင့် Kramer ကသူ့လေ့လာမှုရဲ့ပြတင်းပေါက်ဘောင်ထဲကို ၀ င်သွားတယ်။
၄ - ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ကဖေး
Monk ၏ကော်ဖီသည်ဂိုဏ်း၏ဒုတိယနေရာဖြစ်သည်၊ Central Perk ကဲ့သို့ပင် Seinfeld နှင့်ဆင်တူသည် Friends။ ဒီအစုံနှင့်အတူသာ Jerry ရဲ့ ap featuringartဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည်ကျော်ကြားသောကော်ဖီဆိုင်ထဲသို့ ၀ င်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာရန်လိုသည်။ သူတို့ကရေခဲသေတ္တာတွင်စတစ်ကာတစ်ခုမှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။
3 - သံမဏိလူသား
ဂျယ်риသည် Superman ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသံမဏိလူသားသည်ရေခဲသေတ္တာပေါ်ရှိစတစ်ကာများအများအပြားထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ရာသက်ပန်သူငယ်ချင်းဂျော့ခ်ျမှတ်ချက်ချသကဲ့သို့“ ဂျယ်ရီ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသည်စူပါမင်းနှင့်သီးနှံများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ” ရလဒ်အနေနှင့် Superman သည်စီးရီးတစ်ခုလုံးအကြားတွင်ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသောအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ရပ်များ, 180 ဖြစ်စဉ်များအသီးအသီးအသီးအသီး၌သူ့ကိုအနည်းဆုံးရည်ညွှန်းရှိကွောငျးကောလာဟလများရှိပေမယ့် Superman ကျွမ်းကျင်သူနှင့် 'စူပါမင်းပင်မစာမျက်နှာ' Barry Freiman ၏နှောင်းပိုင်းကမှူးတစ်ချိန်ကဒီပြောဆိုချက်ကိုသို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် 46 ၏သာဖော်ပြချက်တွေ့ရှိခဲ့ သံမဏိ။ သင်ဤရည်ညွှန်းထည့်သွင်းပါက 47 လုပ်ပါ။
2 - မင်္ဂလာ Festivus
Festivus သည် ၁၉၉၇ 'The Strike' ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှု၌ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ ဂျော့ခ်ျ၏ဖခင်ဖရန့်ခ်ျသည်ခရစ်စမတ်အလွန်စီးပွားဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာပွဲနေ့ကိုတီထွင်ခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်ကျင်းပသောပွဲတော်သည်ထင်ရှားသောအလူမီနီယံတိုင်များကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။
ယခုအခါ Festivus သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်စစ်မှန်သောပွဲနေ့မဟုတ်သောပွဲနေ့ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည်အလွန်ရေပန်းစားသောကြောင့် Festivus တိုင်ကိုအတွင်း၌သာထည့်သွင်းရမည် ၂၁၃၂၈ Seinfeld.
အစုံထဲ၌အကောင်းဆုံးအီစတာကြက်ဥတစ်လုံးသည်အမှန်တကယ်စီးရီးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာတစ်ခု၏အမှတ်အသားမဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုဖန်တီးရန်တာ ၀ န်ရှိသောအမျိုးသားတစ် ဦး အားဂုဏ်ပြုခြင်းသာဖြစ်သည်။ Jerry Seinfeld နှင့်အတူလာရီဒေးဗစ်သည်ပြပွဲအား၎င်းအားနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်စဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ David ဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်တဲ့ sitcom 'Curb Your Enthusiasm' မှာသရုပ်ဆောင်ရပေမယ့်သူ့ကိုဒီအစုထဲထည့်သွင်းရတာတကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ သူသည်ထိုရေခဲသေတ္တာထဲ၌ပြည့်နှက်နေသောညွှန်းကိန်းများနှင့်အတူတွေ့နိုင်သည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ဖတ်ရှုဖို့ ၂၁၃၂၈ Seinfeld။ နောက်ဆုံးပေါ် Lego Ideas set ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်အခြားလူများအားရောင်းချခြင်းမပြုမီ VIP များအတွက်အထူးသီးသန့်ရရှိနိုင်သည်။
← LEGO VIDIYO ဘာတွေမှားနေတာလဲ
LEGO - 'မင်းကအသေးစားရုပ်ပုံလွှာတိုင်းမှာလက်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ →